UPDATE: Nin hubeysan oo dad shacab ah ku laayay Muqdisho | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh UPDATE: Nin hubeysan oo dad shacab ah ku laayay Muqdisho
UPDATE: Nin hubeysan oo dad shacab ah ku laayay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Nin hubaysan oo ku labisnaa dareeska ciidanka dowladda ayaa Degmada Warta Nabadda (Wardhiigley) ee Gobolkaan Banaadir waxa uu ku dilay laba ruux, halka sidoo kalena uu ku dhaawacay 9 kale, sida dadka deegaanka ay ku warameen.
Ninka hubaysan ayaa weeraray guri sida la sheegay lagu tumo mingiska, waxaana halkaasi uu ku furay rasaas sababtay dhimashada laba ruux oo dhalinyaro ahaa iyo dhaawaca dadkaasi kale.
Aabaha dhalay mid ka mid dadka meesha ku dhintay ayaa sheegay in Wiilkiisa oo lagu Magacaabi jiray Saleemaan Maxamed Mahdi uu daawasho u tegay Guriga oo deris la ah oo ku yaalla agagaarka Masjidka xaaji Yuusuf, isla markaana meydka wiilkiisa uu Goobta ka qaatay.
Afhayeenka booliska Soomaaliya, Dhamme Sadiiq Adan Cali ayaa sheegay in lagu raad joogo ninka falkaasi geystay, oo falka kaddib goobta ka baxsaday, ayna baaritaan ku hayaan sababta keentay inuu goobtaasi beegsado.
Si kastaba, waxaa muddooyinkaan soo badanaya dhacdooyinka argagaxa leh ee ay gaysanayaan rag hubaysan, kuwaasi oo dilal toos ah u gaysanaya dad shacab ah oo aan waxba galabsan.